Nucleus Accumbens Neurons မှသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်ကိုကာကိုလာကိုကာကိုလာရွေးချယ်ခြင်း encoding သည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့်မပတ်သက်ပါ။
နျူကလိယ Accumbens အာရုံခံအားဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များသာရှိပြီးပြည်ပမှကင်း၏ရွေးချယ် Encoding နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး Exposure (2003) မှ Related မဟုတ်
မှတ်ချက်များ - ဆုရစင်တာတွင်မည်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များရေနှင့်ကိုကင်းတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကကိုကင်းနှင့်ရေအကြားထပ်တူကျမှု (နှင့်ယခင်စမ်းသပ်မှုတွင်အစားအစာ) တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လိင်နှင့်တူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များကိုလှုပ်ရှားစေသည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်,3ဒီဇင်ဘာလ 2003,
Regina အမ် Carelli နှင့်
စိတ်ပညာဌာန၊ Chapel Hill ရှိမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်၊ ချာပယ်ဟေးလ်၊ မြောက်ကာရိုလိုင်းနား ၂၇၅၉၉-၃၂၇၀
နျူကလိယ accumbens (Acb) အာရုံခံဆဲလ်အချို့သည်“ သဘာဝ” (အစားအစာနှင့်ရေ) အတွက်ရည်မှန်းချက်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားစွာ encode လုပ်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုကင်းဆုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ (Carelli et al ။ , 2000). ဒီနေရာတွင်ကိုကင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည် Acb အာရုံခံဆဲလ်များကရေကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း encoding သည်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မလားစစ်ဆေးသည်။
Acb ဆဲလ်များသည်ကိုကာကိုလာ၏ပထမဆုံးနေ့မှစပြီးထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးများမှရေ - ကိုကင်းအစီစဉ်များစွာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုရေအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး Acb ရှိ extracellular recording အတွက်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁ ပတ်အကြာတွင် Acb ဆဲလ်များသည်ရေ - ကိုကင်းမျိုးစုံအချိန်ဇယားဝယ်ယူစဉ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ရေအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထူထောင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ဇယားအမျိုးမျိုးကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ (၁)“ ကန ဦး” (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေ့ ၁)၊ (၂)“ ယုံကြည်စိတ်ချရသော” (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူသည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော်လည်းမှားယွင်းသည်)၊ (၃)“ တည်ငြိမ်မှု” (ကိုကင်းတုံ့ပြန်မှုတည်ငြိမ်မှု) ။
ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်ကိုကင်းအာရုံခံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေရွေးချယ်အာရုံခံရာခိုင်နှုန်းသည်မြင့်မားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအတွေ့အကြုံ (ဥပမာ - တည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်းအတွင်း) နှင့်တူညီသည်။ မှတ်သားစရာမှာကိုကင်းအားထိတွေ့စဉ်ကထပ်တူထပ်တူ (အလားတူ) အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုဖော်ပြသည့်အာရုံခံများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်နိမ့်ကျပြီး (၈%) နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်းများတွင်နိမ့်ကျခဲ့သည်။
ဤတွေ့ရှိချက်များက Acb ရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များသည်သီးခြားသဘာဝအရအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားစွာ encode လုပ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာသည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မဟုတ်ဟုမြင်သည်။
လွန်ခဲ့သော အပိုင်းနောက်တစ်ခု အပိုင်း
နျူကလိယ accumbens (Acb) သည်“ သဘာဝ” ဆုလာဘ်များနှင့်အလွဲသုံးစားမှုရှိသောပစ္စည်းများ (အားဖြည့်ပေးသောဂုဏ်သတ္တိများကိုဖျန်ဖြေရာတွင်အဓိကကျသည်။ )ကယ်လီ, 1999; Koob နှင့် LeMoal, 2001; ပညာရှိ 1982, 1997, 1998) ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုပြုမူခြင်းဖြင့် Electrophysiological မှတ်တမ်းများသည် Acb neuron များအနက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု၏စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပုံသဏ္fourာန်လေးမျိုးကိုပြသသည်။Carelli နှင့် Deadwyler, 1994; Carelli, 2000) ။ သူတို့အားဆဲလ်လေးမျိုးအမျိုးအစားသုံးခုကိုရေအားဖြည့်နေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝအားဖြည့်အရာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုတွင်“ ပုတ်” ခြင်းရှိမရှိကိုဖြေရှင်းရန်သဘာဝအားဖြည့်နှစ်မျိုး (ဥပမာရေနှင့်အစားအစာ) နှစ်ခုလုံးအတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံသည့်လေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ထိုသဘာဝအားဖြည့်ခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းကင်းများထဲမှ (Carelli et al ။ , 2000). ရလဒ်အနေဖြင့်အာရုံခံအများစုသည်သဘာဝအားဖြည့်အခြေအနေနှစ်ခုတွင်ထပ်တူထပ်နေသောထပ်တူအာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုပြသခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Acb ဆဲလ်များ၏ ၈% သာလျှင်ရေ (သို့မဟုတ်အစားအစာ) ကိုကင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလားတူပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေသည်“ အားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်” လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသပြီးကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလုပ်ဆောင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။.
သို့သော်ကိုကိုင်းအားကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များ (ဥပမာ - ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်) တွင်အထက်ပါလေ့လာမှုကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအတော်များများအရကိုကင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲကိုင်တွယ်ခြင်းသည် Acb ရှိဆယ်လူလာ“ neuroadaptations” ကိုဖြစ်စေသည် (ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991; အဖြူရောင် et al ။ , 1995; ရှီ et al ။ , 2002ပြုမူတိရိစ္ဆာန်များနိုးထဖို့ယေဘူယျပါပြီ (လူမျိုး et al ။ , 1999) ။ ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (SA) ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သော Acb တွင် neuroadaptations သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး အစီရင်ခံစာနှင့်ယခင်က (၂) ခုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသော Acb အားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်ပုံစံဖြင့်ဆေးထုတ်လွှတ်မှု၏အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်။Bowman et al ။ , 1996) ။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းဓာတ်ထိတွေ့ခြင်းသည် Acb ဆဲလ်များ၏တုန့်ပြန်မှုအား cortical သို့မဟုတ် subcortical inputs များသို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Acb အာရုံခံရှိအချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏အားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့ encode လုပ်သည်ကိုသတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။Pennartz et al ။ , 1994; Carelli၊ ၂၀၀၂b) ။ ထို့ကြောင့်ကိုကိန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာဝ (ရေ) ဆုလာဘ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သော Acb ရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်တစ်ခုထဲသို့အသာပုတ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို encode လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ Acb အာရုံခံဆဲလ်ကိုကိုကင်းထိတွေ့မှုပထမလေ့လာမှုကနေကိုကာကိုလာကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကြာမြင့်စွာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ဒီနေရာကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ reinforcer- ရွေးချယ်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုကင်းနှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုအပေါ်မှီခိုလျှင်, Acb ဆဲလ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့စဉ်အတွင်းနှစ် ဦး စလုံးအားဖြည့်အခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးအလားတူပစ်ခတ်မှုပုံစံများပြသသင့်ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည် ဤကိစ္စတွင်ယခင်ကမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်ပုံစံဖြင့်ဆေးထုတ်လွှတ်မှုသည်တစ်ကိုယ်ရေသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကိုကင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကို encode လုပ်သောအာရုံခံဆဲလ်များသည်ဆေးဝါးသမိုင်းမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူရေရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်ဆဲလ်များနှင့်မတူပါကအားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုအပိုင်း (၁) ၏ပထမအပိုင်းအဖြစ်စောစီးစွာလေ့လာသင့်သည်။
ရေအားဖြည့်သင်တန်း။ အမျိုးသား Sprague Dawley ကြွက်များ (Harlan Sprague Dawley, Indianapolis, IN) ∼90-120 old အရွယ်ရှိပြီးအလေးချိန် 275-350 gm ကိုဘာသာရပ်များအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။n = 8) ။ တိရိစ္ဆာန်များကိုတစ် ဦး ချင်းတည်းခိုပြီးရေစားသုံးမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ၄ င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ၈၅% တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှုကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်တိရိစ္ဆာန်များအားတစ်နေ့လျှင်ရေ ၁၀-၁၅ မီလီမီတာ (သင်ခန်းစာတွင်သုံးစွဲသောရေ ၁.၀ မှ ၁.၅.၅ မီလီယံအပြင်) ကိုပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများကိုစီးပွားဖြစ်အသံ - attenuated cubicle (Fibrocrete, Crandall, GA) အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်သည့် 85 × 10 × 15 cm Plexiglas အခန်း (Med Associates, St. Albans, VT) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခန်း၏ဘေးတစ်ဘက်တွင် ၁၇ စင်တီမီတာခြား။ လီဗာ (Coulbourn Instruments, Allentown, PA) တွင်ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောလီဗာ (၂) ခုပါရှိသည်။ လီဗာများအကြားရေပစ္စည်များ (လီဗာတစ်ခုစီမှ ၇ စင်တီမီတာနှင့်အခန်း၏အောက်ခြေမှ ၂.၅ စင်တီမီတာ) ရှိသည်။
တိရိစ္ဆာန်များအားအစပိုင်း၌လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်ရေမြှင့်တင်ရန်အခန်းရှိလီဗာကိုဖိအားပေးရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိုး ၁ (FR1) အားဖိအားပေးရန်အခန်းထဲတွင်ဖိရန်။ လီဗာ၏စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုစီတိုင်းသည် (1 ml) ရေ (၀.၀၅ မီလီမီတာ) ကိုလီဗာ (၂၀ စက္ကန့်) ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်နှိပ်သောအသံလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်း (၁၀ ခေါက် / စက္ကန့်၊ 0.05 db; 20 Hz; 10 sec) မှအချက်ပြသည့်ရေကန်ထဲသို့ပို့ဆောင်သည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာရေလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်များကိုမေ့ဆေးယူပြီး ketamine hydrochloride (2 mg / kg) နှင့် xylazine hydrochloride (3 mg / kg) ဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Acb တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် extracellular မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်ခွဲစိတ်မှုဖြင့်အတူတူပင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ရန်အတွက်ပြွန်ကိုယုဂျင်သွေးကြောထဲသို့ထည့်သွင်းပြီးနောက်နောက်ဖက်ရှိအရေပြားအောက်ပိုင်းကို ဖြတ်၍ အသုံပြုခြင်းစည်းဝေးပွဲတစ်ခုတွင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည် (ကာဣန et al ။ , 1993; Carelli နှင့် Deadwyler, 1994) ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုလည်း Acb တွင်နာတာရှည် extracellular မှတ်တမ်းတင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည် (Carelli နှင့် Deadwyler, 1994) ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုစီးပွားဖြစ်အရင်းအမြစ် (NB Labs, Denison, TX) မှပုံစံထုတ်ပြီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ ခင်းကျင်းပြသမှုတွင်မိုက်ခရိုဝါယာရှစ်လုံး (အချင်း ၅၀ μm) ပါဝင်ပြီးအစွန်အဖျားခွဲခြားထားသော ၀.၂၅ မီလီမီတာရှိသည်။ တစ်ခုလုံးကိုခင်းကျင်း mm50 မီလီမီတာ၏ခန့်မှန်း rostral-caudal အကွာအဝေးသရုပ်ဆောင်။ အချို့ကိစ္စများတွင် (n =4ကြွက်), ယခင်ကဖော်ပြဒုတိယခင်းကျင်းအမျိုးအစား (Carelli et al ။ , 2000) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤခင်းကျင်းမှုတွင်အတန်းသုံးတန်းဖြင့်စီစဉ်ပေးသောမိုက်ခရိုဝေ့ရှစ် (အချင်း ၅၀ μm) ၏“ အစုအဝေးများ” ပါဝင်သည်။ ပထမအတန်းတွင် ၀ ိုင် ၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယအတန်းများတွင်ဝါယာကြိုး (၃) ခုပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုခင်းကျင်း ∼50-0.25 မီလီမီတာ anteroposterior (AP) နှင့် 0.25-0.35 မီလီမီတာအလယ်အလတ် (ML) ၏အကွာအဝေး spanned ။ တစ်ခုချင်းစီကိုခင်းကျင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်မြေပြင်ဝါယာကြိုးလည်းပါ ၀ င်ပြီး ၃-၄ မီလီမီတာအတွင်း၌ပင် ဦး နှောက်ထဲသို့ ipsilateral နှင့် bregma သို့ mm0.65 mm caudal ထည့်သွင်းထားသည်။ Array ကို Acb ထဲသို့အပြီးအပိုင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် (AP +0.35 mm; ML, 0.65 mm; dorsoventral, bregma နှင့် level skull, 3-4 mm) ။
ရေ - ကိုကင်းမျိုးစုံအချိန်ဇယားကို။ ပြွန်နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း implantation ပြီးနောက်တစ်ပါတ်အကြာတွင်မူပြန်လည်အားဖြည့်ကုသမှုကိုရေအားဖြည့်မှုအတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရေနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းအစီအစဉ်ဇယားအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများအားလုံးတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေအားဖြည့်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကိုအချိန်ဇယားအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဖြစ်ရပ်တွင်တိရိစ္ဆာန်များသည်ရေဖြင့်အားဖြည့်သည့်လီဗာကို ၈-၁၀ မိနစ်အထိအသုံးပြုသည်၊ ထို့နောက် ၂၀ စက္ကန့်ကြာသောအချိန်ကာလ (လီဗာကိုမတိုးချဲ့) နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောဒုတိယနေရာတွင်ကွဲပြားသောလီဗာ (၂ နာရီ) တိုးချဲ့သည်။ မျိုးစုံအချိန်ဇယား၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း၏အစကိုဒုတိယလီဗာနှင့်လီဗာချဲ့ထွင်မှုအထက် ၆.၅ စင်တီမီတာအထက်တွင်တည်ရှိသည့် cue light စတင်ခြင်းဖြင့်အချက်ပြခဲ့သည်။ FR8 အချိန်ဇယားအပေါ်လီဗာစိတ်ကျရောဂါသည်ကိုကာကိုလာအား (၆၀၀ စက္ကန့်အတွင်းပြုတ်ကျလျှင် ၁.၃၃ မီလီဂရမ်၊ ပြုတ်ရည်ပါသော heparinized ဆားမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်) ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ထားသောဆေးထိုးအပ်စုပ်စက်မှတစ်ဆင့်သွေးကြောသွင်းခြင်း (Model PHM-10; Med Associates) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်ဆေးပြုတ်ရည်လီဗာ၏ဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းအချက်ပြခဲ့သည် (20 sec) နှင့်သေံလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်း (2 db; 6.5 Hz) 1 စက္ကန့် (စုပ်စက်ကြာချိန်ထက်ကျော်လွန်။ 0.33 စက္ကန့်) ကျော်တင်ပြခဲ့သည်။
Electrophysiological အသံသွင်း။ Electrophysiological လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါပြီ (Carelli နှင့် Deadwyler, 1994; Carelli et al ။ , 2000) ။ အတိုချုပ်၊ အပိုင်းတစ်ခုစီမစတင်မီ၊ အကြောင်းအရာသည်အခန်းတွင်းရှိထိန်းညှိမှုမရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကိုခွင့်ပြုသည့် commutator (Med Associates) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော cable cable နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အသံသွင်းထားသည့်ကေဘယ်တစ်ခုစီ၏ရှေ့ပိုင်းတွင်သေးငယ်သောစည်းလုံးမှု ၁၆ ခုမျှသော Field Effor Transistor များပါ ၀ င်သည်။ Acb လှုပ်ရှားမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အမြဲတမ်းထည့်သွင်းထားသောမိုက်ခရိုယာယာများမှတက်ကြွသောနှင့်မလှုပ်မရှားသော (ရည်ညွှန်း) လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အာရုံကြောဆူးလှုပ်ရှားမှု၏မရှိခြင်းကိုအတည်ပြုရန်နှင့်မဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအခြားလျှပ်များအတွက် differential ကိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အဆိုပါမလှုပ်မရှားလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို session ရဲ့ start မတိုင်မီဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအားအွန်လိုင်းတွင်သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် neurophysiological system (multichannel acquisition Processor, MAP System; Plexon, Dallas, TX) ကို အသုံးပြု၍ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ အကွိမျမြားစှာပြတင်းပေါက် - ခွဲခြားဆက်ဆံမှု module များနှင့်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲနှင့်တွဲဖက်။ မြန်နှုန်းမြင့် Analog-to- ဒစ်ဂျစ်တယ် signal ကိုအပြောင်းအလဲကို waveform ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အခြေခံပေါ်မှာအာရုံခံအချက်ပြ၏အထီးကျန် enabled ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒစနစ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြပရိုဆက်ဆာများ (DSPs) များစွာပါ ၀ င်သည်။ DSPs သည်ကွန်ပျူတာသို့အာရုံခံဆူးဖြစ်စဉ်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အပြိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာစမ်းသပ်မှု၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ (Med Associates) သည်နှင့်အာရုံကြောအချက်အလက်နှင့်အတူအချိန်တံဆိပ်ခတ်ခံရဖို့ MAP box ကိုမှဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ် outputs ကိုစေလွှတ်။ , အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒစနစ်သည်အာရုံခံလုပ်ဆောင်မှုအလားအလာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို အသုံးပြု၍ မိုက်ကရိုဝေ့ (လ်) တစ်ခုလျှင်အာရုံခံဆဲလ် (၄) ခုအထိမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ သို့သော်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုမှနှစ်ခုသို့မိုက်ခရိုဝေ့ယာတစ်ခုစီမှတ်တမ်းတင်သည် (Chang et al ။ , 1994; Nicolelis et al ။ , 1997) ။ ကြိုးတစ်ချောင်းပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံဆဲလ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အချက်များကိုယခင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည် (Chang et al ။ , 1994; Nicolelis et al ။ , 1997; Nicolelis၊ ၁၉၉၉; Carelli et al ။ , 2000) ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဆဲလ်တစ်ခုတည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းစီ၏လှိုင်းပုံစံများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်နမူနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အချိန်ဗို့သေတ္တာများ၊ သို့မဟုတ် neurophysiological software software system (MAP system; Plexon) မှပေးသော“ off-line sorter” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ template ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း waveform တစ်ခု "နမူနာ" ယူပြီးနှင့် extracellular waveform တစ်ခု template ကိုတည်ဆောက်ခြင်းပါဝငျသညျ။ ဒီလှိုင်းပုံစံ "ကိုက်ညီ" သောနောက်ဆက်တွဲအရေးယူမှုအလားအလာအတူတူပင်ဆဲလ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အချိန်ဗို့အားသေတ္တာများကိုအသုံးပြုသောအခါ waveform နမူနာတစ်ခုကိုယူပြီးစမ်းသပ်သူသည်သေတ္တာနှစ်ခုကိုအပေါ်သို့တင်လိုက်သည် (ပုံမှန်အားဖြင့်တက်နေသည့်ခြေလက်ပေါ်မှတစ်ခုနှင့် extracellular waveform ၏အဆင်းဘောင်မှအခြားတစ်ခု) ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသေတ္တာများဖြတ်သန်းသောအခါနောက်ဆက်တွဲနမူနာအာရုံခံဆဲလ်များသည်တရားဝင်အဖြစ်လက်ခံသည်။ တစ်ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုအားသီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များကို neurophysiological software ကို သုံး၍ လိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ထားသည် (ဥပမာ microwire electrode ပေါ်ရှိ“ new” newron များကိုခွဲခြားရန်သို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားလျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲရန်) ။ ။ off-line sorter ပရိုဂရမ်သည်စမ်းသပ်မှုပြီးစီးပြီးနောက်အာရုံကြောတစ် ဦး ချင်းစီ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလှိုင်းပုံစံကိုခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်ခေတ်မီပရိုဂရမ်အဓိကသုံးအစိတ်အပိုင်းများစီမံကိန်း (Plexon) ကိုအသုံးပြု။ သုံးဖက်မြင်အာကာသအတွင်း waveforms ၏ manual စပျစ်သီးပြွတ်ရွေးချယ်ရေးအပါအဝင်တစ် ဦး ချင်းစီ waveforms ခွဲထုတ်ရန်နည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။
ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုရေ - ကိုကင်းအချိန်ဇယားအတွင်းလီဗာပူးလ်တုံ့ပြန်မှုပုံစံများကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောတုံ့ပြန်မှုမှတ်တမ်းများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်မကြာခဏမတုံ့ပြန်သည့်အခါကန ဦး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်များတွင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအားအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သေနတ်ပစ်နှုန်းများကိုပြသခဲ့သည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ရေသို့မဟုတ်ကိုကင်းမှအားဖြည့်သည့်လီဗာပုံနှိပ်ခြင်းကိုအိတ် ၂၀ အတွင်းကာလအတွင်းဆဲလ်တစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည့်ရုပ်ပုံများနှင့်ကာလအပိုင်းအခြားဆိုင်ရာ histograms (PEHs) ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပုံစံထုတ်လွှတ်ခြင်းအမျိုးအစားများ [ကြိုတင်တုံ့ပြန်မှု (PR)၊ အားဖြည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု (RFe), အားဖြည့်တားစီးမှု (RFi) နှင့် PR + RF] တို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး PEH တစ်ခုစီတွင်လေးကြိမ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောယုတ်သောပစ်ခတ်မှုနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်)Carelli နှင့် Deadwyler, 1994; Carelli et al ။ , 2000) ။ PEH တစ်ခုစီအတွင်းအချိန်ကာလ (၄) ခုသည် (၁) အခြေခံဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလ (-၂.၅ မှ ၂.၅ အထိ) အားဖြင့်အားဖြည့်လီဗာ၏တုံ့ပြန်မှုမစတင်မီ (၂) တုံ့ပြန်မှုကို (၂) မှအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 1 sec) အားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုအားအကောင်အထည်မဖော်မီနှင့်အတွင်းရှိချက်ခြင်း (၃) အားဖြည့်ခြင်း၊ တုန့်ပြန်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအချိန်ကာလ (၀.၂.၅ စက္ကန့်) နှင့်အချိန်ကာလ (၇.၅-၁၀) အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း အဆိုပါအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်စက္က) ။
အာရုံခံဆဲလ်တစ်ခုစီအားပုံစံထုတ်လွှတ်သောအမျိုးအစား ၄ ခုထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုယခင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် (Carelli et al ။ , 2000) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ တုန့်ပြန်မှုကာလ၌သာ ၁ စက္ကန့်အတွင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်း≥40% တိုးလာပါက၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက neuron တစ်ခုကို type PR ဟုသတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ အာရုံခံဆဲလ်သည်တုန့်ပြန်မှုအဆင့်မှ စတင်၍ တိုးမြှင့်ခြင်းအဆင့်သို့အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲတိုးချဲ့သော ၄၀% တိုးတက်မှုကိုပြခဲ့ပါက၎င်းသည် PR အာရုံခံဆဲလ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အားဖြည့်အဆင့်တွင် (ဥပမာ - တိုတောင်းသော RFe ဆဲလ်များ) တွင်သာအများဆုံးစက္ကန့်အတွင်းဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု≥1% တိုးလာပါကသို့မဟုတ် ၄၀% တိုး။ ပြလျှင်၎င်းသည်အာရုံခံဆဲလ်ကို RFe ဟုသတ်မှတ်သည်။ ယင်း၏သက်ဆိုင်ရာအခြေခံလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့် (ရှည်လျားသောကြာရှည် RFe ဆဲလ်) နှစ် ဦး စလုံးစဉ်အတွင်း။ RFi ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်တုန့်ပြန်မှုနှင့်အားဖြည့်အချိန်ကာလများအတွင်း ၁ စက္ကန့်အတွင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်း၏≥40% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြေခံနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတုန့်ပြန်မှုနှင့်အားဖြည့်အချိန်ကာလနှစ်ခုလုံးအတွင်း (သို့သော်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအဆင့်) နှစ်ခုလုံးအတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏≥40% တိုးလာပါကအာရုံခံဆဲလ်ကို PR + RF အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင် PR + RF ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်လှုပ်ရှားမှုအထွတ်အထိပ်နှစ်ခုမှအကြားအခြေခံအဆင့်အထိလှုပ်ရှားမှုအားလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ Nonphasic (NP) အာရုံခံများသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားလေးမျိုး၏လှုပ်ရှားမှုလက္ခဏာတွင် ၄၀% အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ၄ င်း၏အချိန်အပိုင်းအခြားများ၌အလားတူပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုပြသခဲ့သည်။ အထက်ပါဆဲလ်အမျိုးအစားခွဲခြား၏စာရင်းအင်းအတည်ပြုချက်ကိုတစ် ဦး ကိုအသုံးပြု။ ပြည့်စုံခဲ့သည် t အတိအကျအထွတ်အထိပ် (PR, RFe, PR + RF) သို့မဟုတ်ကျုံ့ (RFi) ပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောမှီခိုနမူနာများအတွက်စမ်းသပ်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခြေခံနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားအမျိုးအစားအားလုံး၏အာရုံခံ။
ပုံမှန်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာ histograms များကို phasically active neurons အားလုံးအတွက် ၂၀ စက္ကန့်ကြာချိန်အတွင်းတွင်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ ရေနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုကိုကွင်းပိတ်ခဲ့သည်။Carelli et al ။ , 2000) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ရေနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ရန်အချိန်ဇယားအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသော PR၊ RFe, RFi နှင့် PR + RF ဆဲလ်များအားလုံး၏အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုစုပေါင်း PEHs များမှတိကျသောအမျိုးအစားရှိဆဲလ်အားလုံးနှင့်ပုံမှန်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်ပုံမှန်နှိုင်းယှဉ်ပါကတင်ပြခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံခံ၏။ ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းဆဲလ်များ၏လူ ဦး ရေ၏လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများအားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အာရုံခံဆဲလ်များအကြားပစ်ခတ်မှုနှုန်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် (Carelli နှင့် Deadwyler, 1994).
တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုဆိုဒီယမ်ပင်နဘarbital (၅၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ဖြင့်မေ့ဆေးပေးခဲ့ပြီး ၁၀ ဂရမ်AAသည် ၆ စက္ကန့်မှတဆင့်ကူးယူထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုဖြတ်သွားသည်။ ကြွက်များကို paraformaldehyde 50% ဖြင့်ရောနှောခဲ့ပြီး Acb ၏ rostral-caudal အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်တွင် ဦး နှောက်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ခွဲခြင်း (10 μm) ခွဲထားသည်။ thionin အတွက်စုပ်ယူမှုများနှင့်သိသိသာသာလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျား၏တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြာရောင်အစက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်ကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ Prussian အပြာရောင်နှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည် (အစိမ်းရောင်, 1958; Carelli နှင့် Deadwyler, 1994) ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Serial ကဏ္sectionsများကိုအလင်းဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး Paxinos နှင့် Watson တို့၏ stereotaxic atlas မှကောက်ယူရရှိသော coronal ကဏ္onများရှိဘာသာရပ်အားလုံးအတွက်အမှတ်အသားပြုထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြံပေးချက်များ၏တည်နေရာများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။1997) ။ Acb (အဓိက၊ အခွံနှင့် rostral တိုင်) ၏ဒေသအမျိုးမျိုးနှင့်ဤဒေသများကြားရှိနယ်နိမိတ်များအတွင်းသိသာထင်ရှားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစွန်အဖျားတည်နေရာများကို (၁) rostral တိုင်၏အဆင့်တွင်အစွန်းအထင်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ နှင့် caudal Acb ဒေသများ၊ (၂) ဦး နှောက်အတွင်းရှိတိကျသော“ အထင်ကရနေရာများ” (ဥပမာ - ရှေ့မျက်နှာစာ commissure) နှင့် (၃) Paxinos နှင့် Watson တို့၏ stereotaxic atlas တွင်ဖော်ပြထားသည့် Acb ၏ခန္ဓာဗေဒအစီအစဉ် (1997).
တိရိစ္ဆာန်များကိုကန ဦး ၌ရေအားဖြည့်ရန်လီဗာကိုဖိပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုကိုရရှိခဲ့စဉ်ကရေ - ကိုကိန်းအကြိမ်များစွာအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ဇယားမျိုးစုံရှိသည့်အပြုအမူကိုအပိုင်းတစ်ခုစီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းအပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပုံစံများကို အခြေခံ၍ အပိုင်းပိုင်း (ကန ဦး၊ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သတိပြုပါ (သဖန်းသီး။ 1အောက်ခြေ) Self- အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူသည်အစည်းအဝေး၏အစတွင်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခု“ ပေါက်ကွဲခြင်း” ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ၎င်းနောက်ယုတ် interinfusion ကြားကာလ (INTs) ကို min5 မိနစ်ပုံမှန်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အစိတ်အပိုင်းသုံးခုကို ဖြတ်၍ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ပုံပုံစံများကိုကိုယ်စားပြုသောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်အတွက်ပြသထားသည် ပုံ 1.
ရေ - ကိုကင်းများပြားသောအချိန်ဇယားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်အချိန်တွင်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အတွက်အပြုအမူ (လီဗာစာနယ်ဇင်း) ၏တုန့်ပြန်မှုပုံစံကိုစုစည်းထားသောမှတ်တမ်းများ။ ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့မှုပထမ (ကန ဦး) တွင်တိရစ္ဆာန်သည် ၂၂.၁၉ စက္ကန့်အတွင်း INT ဖြင့်ရေအတွက်တုံ့ပြန်မှု ၂၈ ခုပြီးစီးခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်ကာလအတွင်းကိုကင်းကိုလီဗာပေါ်တွင်သုံးကြိမ် (ပွင့်လင်းသောမြားခေါင်းများဖြင့်ညွှန်ပြသည်) ကိုရေတင်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတုံ့ပြန်မှုပထမအကြိမ်တွင်ရေကိုဖိအားပေးခြင်းသည်တည်ငြိမ်နေခဲ့သည် (၁၆ ပုံနှိပ်စက်; INT, 28) နှင့်သွေးကြောသွင်းကိုကင်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုသည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော်လည်းမှားယွင်းသည်။ တည်ငြိမ်သောအစိတ်အပိုင်း (နေ့ ၇ ရက်) တွင်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသည်ရေ (၂၁ ခု၏တုံ့ပြန်မှု ၂၁; ဆိုလိုသည်မှာ INT၊ ၄၂.၈၅ စက္ကန့်) နှင့်ကိုကင်း (၂၂ ခု၏တုံ့ပြန်မှု၊ ဆိုလိုသည်မှာ INT၊ ၆.၁၃ မိနစ်) အတွက်တည်ငြိမ်သည်။
ပထမအစိတ်အပိုင်း (ကန ဦး) တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မြောက်မြားစွာအစီအစဉ်ဇယားပါရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးတွင်ရေအားဖြည့်မှုအတွက်အပြုအမူတုန့်ပြန်မှုသည်တည်ငြိမ်သည် (ဆိုလိုသည့်တုံ့ပြန်မှုများ၊ ၂၂.၂၅ - ၁.၃; ဆိုလို။ INT, ၃၂.၇၅ - ၅.၇၇ စက္ကန့်) ။ သို့သော်ကန ဦး ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်အတွင်းသွေးကြောသွင်းအားကိုကိုကင်းအတွက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသည်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့သလိုမှားယွင်းမှုလည်းရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်စမ်းသပ်သူသည်တိရိစ္ဆာန်များကိုကိုကာကိုလာအကြိမ်ကြိမ်ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဆေးကြောရသည်။ priming သည် session ၏အစသာမဟုတ်ဘဲ session တစ်ခုလုံးတွင်မကြာခဏပေးလေ့ရှိသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ကိုကင်းလီဗာပေါ်တွင်ရေစက်တစ်ချောင်းကိုစမ်းသပ်မှုများစွာ ပြုလုပ်၍ ထိုလီဗာဆီသို့လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
နောက်လာမည့် ၂-၆dလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုစိတ်ချရသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးအတွက်ပထမဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောသင်ခန်းစာတွင်ရေအားဖြည့်ခြင်းအတွက်တုန့်ပြန်မှုသည်တည်ငြိမ်နေဆဲ (ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှု ၂၂.၃၈ ± ၁.၁၂; ဆိုလို။ INT, ၂၄.၉၂ - ၁.၄၀ စက္ကန့်) ။ ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်တွင်စမ်းသပ်သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်မှုပြုရန်ကိုကင်းသုံးသွင်းခြင်းထက်မပိုသောတိရစ္ဆာန်အားဆေးကြောရန်လိုအပ်နေသည် (ရေကိုကိုကင်းဓာတ်ကိုဘယ်သောအခါမျှထည့်ထားခြင်းမရှိပါ) ။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အခြေခံပြုတ်ရည်များသည်မလိုအပ်ပါ။ ကိုကင်းထိတွေ့ခြင်း၏ပထမနေ့နှင့်မတူသည်မှာဤလေ့ကျင့်မှုအဆင့်တွင်တိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးတွင်ကိုကင်းအားတုံ့ပြန်မှု၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်မှာ ၄.၀၀ ± ၁.၀၇ မိနစ်ဖြစ်သည်။
6-9dလေ့ကျင့်ပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များအချိန်ဇယားမျိုးစုံအဆင့်နှစ်ခုလုံးစဉ်အတွင်းတည်ငြိမ်တုံ့ပြန်ပြ။ အထူးသဖြင့်ရေအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုကို ၂၁.၃၈ ± ၁.၂၁ တုံ့ပြန်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအားဖြင့် ၃၀.၇၅ ± ၃.၅၇ စက္ကန့်ကိုဆိုလိုသည်။ သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်ကိုကင်းအတွက်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတွင်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်။ ပထမ ဦး စွာမူးယစ်ဆေးဝါးအကျဉ်းထောင်တုန့်ပြန်မှုကိုစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာတိရိစ္ဆာန်များသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် (“ ဝန်တင်ခြင်း” အပြုအမူ) ၏အစတွင်တုန့်ပြန်မှုအမြောက်အမြားကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြသလေ့ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်သည်။ တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုဖြတ်ပြီး (n = 8), ဝန် -up, တုံ့ပြန်မှု၏ပျှမ်းမျှအရေအတွက်က 2.75 ± 0.49 မိ၏တစ် ဦး ယုတ် INT နှင့်အတူ 0.76 ± 0.15 ဖြစ်ခဲ့သည်။ load-up ပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များကိုမှန်မှန်လှည့်ပတ် 18.87 ± 1.29 ၏အဖြေအရေအတွက်နှင့် 6.42 ± 0.17 min ၏ပျမ်းမျှ INT နှင့်အတူတုန့်ပြန်။
Nucleus ရေ - ကိုကင်းမျိုးစုံအစီအစဉ်၏ပထမ (ပထမ) အစီအစဉ်တွင်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
ပထမ ဦး ဆုံးအချိန်ဇယားအစီအစဉ် (ဆိုလိုသည်မှာကိုကင်းထိတွေ့မှု၏ပထမနေ့) တွင်အာရုံခံဆဲလ် ၉၇ ခု (ကြွက်ရှစ်ခု) ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဆဲလ် ၉၇ ခုတွင်နျူရွန် ၂၄ (၂၅%) သည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုပြသခဲ့သည်။Carelli et al ။ , 2000) ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အာရုံခံဆဲလ်အစုတစ်စုသည်အားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုမတိုင်မီ၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတွင်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတိုးလာကြောင်းနှင့် PR ဆဲလ်များအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည်။n = ဆဲလ် ၅ ခု၊ 5%) ။ အခြားအာရုံခံဆဲလ်များသည်တုန့်ပြန်မှုအပြီးတွင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပစ်ခတ်မှုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့သည်။n = ဆဲလ် ၁၅ ခု၊ တုံ့ပြန်မှုမတိုင်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်, ချက်ချင်းဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန် 15%), ဒါမှမဟုတ်ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်, RFi (n = ဆဲလ် ၄ ခု၊ 4%) ။ အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံသုံးမျိုး၏ဥပမာများကိုပြထားပါသည် ပုံ 2.
အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံသုံးမျိုးကိုပြသသည့် PEHs သည်ရေအားဖြည့်ရန်လီဗာဖိအားပေးတုံ့ပြန်မှု (FR1) ၏စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ထိပ်တန်း၊ Acb အာရုံခံဆဲလ်၏ဥပမာသည်အားဖြည့်တုန့်ပြန်မှု (PR) မတိုင်မီစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတွင်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတိုးလာသည်။ အလယ်အလတ်၊ နောက်ထပ်အာရုံခံဆဲလ်သည်တုန့်ပြန်မှုပြီးစီးပြီးနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းကိုပြသည် (RFe) ။ အောက်ခြေ၊ တုံ့ပြန်မှုမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းနောက်ခံပစ်ခတ်မှုနှုန်းသိသိသာသာတားစီးမှုကိုဖော်ပြသောတတိယ Acb ဆဲလ်။ R ကို, အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု။ PEH တစ်ခုစီတွင်ဤနေရာတွင်နှင့်နောက်ကိန်းဂဏန်းများတွင် bins ၂၅၀ ပါရှိသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်အစီအစဉ်ဇယားများစွာ၏နေ့ ၁ တွင်အလွန်မှားယွင်းခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုကိုစတင်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးဆောင်များမကြာခဏပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကိစ္စအတော်များများမှာ, တိရိစ္ဆာန်များလေ့ကျင့်ရေး၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌သွေးကြောသွင်း Cocaine များအတွက်ဖိအားကိုတွန်းအားပေးရန်စတင်ခဲ့သည်။ မှတ်သားစရာမှာ၊ ထိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် Acb သည်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်းကိုကင်းကို“ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံဆဲလ်တစ်ခု၏ဥပမာကိုပြသည် ပုံ 3။ အစည်းအဝေးကိုရေအားဖြည့်ခြင်းအဆင့် (စမ်းသပ်မှု ၂၃ ခု) ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး Acb ဆဲလ်သည်ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ (ဥပမာ NP အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ဒေတာကိုမပြပါ) နှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိသဖြင့်ဖြစ်သည်။ Self- အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်အတွင်းတူညီသော Acb ဆဲလ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိုမျဉ်းချပ်များတွင်ပြသည် ပုံ 3။ Self- အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်အတွင်းအပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုပုံစံကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောမှတ်တမ်းတွင်ပြသည် (အထက်သို့ဖော်ပြခြင်းကကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြသည်) ။ SA အဆင့်အစတွင်ကြွက်သည်အဆက်ဆက်ဆက်တိုက်ရှစ်ကြိမ်အထိလီဗာကိုဖိအားပေးခဲ့သည် (Lever Presses: SA of Start) ။ ဤကာလအတောအတွင်း Acb ဆဲလ်ကို nonphasic ပစ်ခတ်မှုဆက်လက် (သဖန်းသီး။ 3; ဘယ်ဘက်ထိပ်ပိုင်းစာရွက်ချပ် () - (တုံ့ပြန်မှုရှစ်ခုမှလေးခုကိုမြှားဖြင့်ပြသည်။ ) ထို့နောက်သတ္တဝါသည်တုန့်ပြန်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနောက် ၃၀ မိနစ်အတွင်းစမ်းသပ်သူ - ဖြန့်ဖြူးသည့်ကိုကင်း - ဖြည့်စွက်ဆေးရည်ငါးမျိုးကိုပေးခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆဲလ်တွင် nonphasic ပစ်ခတ်မှုပြသခြင်းကို အခြေခံ၍ ထိုးသွင်းခြင်း (ထိပ်အလယ်အလယ် PEH၊ ပုံရိပ်ငါးခုအနက်မှနှစ်ခုကိုပြသထားသည်) ။ များမကြာမီတွင်ထိုသတ္တဝါသည်မည်သည့်အရာမှမရှိဘဲလီဗာကိုဖိအားပေးကာကိုကင်းအားဖြည့်ပေးသောတုံ့ပြန်မှု ၂၇ ခုကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင်တန်းပထမဆုံးအဆုံးမှာတော့ဒီသတ္တဝါဟာယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့အပြုအမူကိုစတင်ပြသခဲ့ပြီး RFe ပုံစံထုတ်လွှတ်မှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အတိအကျဆိုရလျှင် RFe ပစ်ခတ်မှုသည် ၂ နာရီကြာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်၏နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုခြောက်ခုအတွင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အတွက်အောက်ခြေညာဘက် stripchart အတွက် session ရဲ့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 3.
ကိုကာကိုလာရွေးချယ်သည့် Acb ပေါ်ထွက်လာမှုသည်ကိုကာကိုလာနှင့်ကိုကိန်းထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေများပြားသောအချိန်ဇယားအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောမှတ်တမ်းသည်အချိန်ကာလ (၁) ရက်၏ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအစိတ်အပိုင်းတွင်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပုံစံများကိုပြသည်။ သတိပြုရမည်မှာတိရိစ္ဆာန်သည်အဆင့်အစတွင်သွေးကြောသွင်းရန်ကိုကင်းအတွက်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုပြုသည်။ ၎င်းနောက်ကိုကင်းအားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသည်မှားယွင်းမှုရှိသော်လည်းတွေ့ရှိရသည်။ Stripcharts များသည် Acb ဆဲလ်ကိုပစ်ခတ်ခြင်းနှင့် (ဥပမာ - ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်များမှမြှား) ကိုကိန်းဓာတ် (မြှားများဖြင့်ညွှန်ပြသည့်ထိပ်တန်းအလယ်ဗဟို) နှင့်နောက်ဆုံးလီဗာလေးလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချိန်တွင်လီဗာ၏ဖိအားပေးမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားပြသည်။ session အတွက်တုံ့ပြန်မှု (မြှားဖြင့်ညွှန်ပြအောက်ခြေညာဘက်) ။ session ရဲ့အဆုံးမှာ RFe ပုံစံလှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်းသတိပြုပါ။ တူညီသောအာရုံခံ (NP) သည်ရေအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NP ပစ်ခတ်မှုကိုပြသည် (အချက်အလက်များကိုမပြပါ) ။
မျိုးစုံအချိန်ဇယား၏နေ့ 1 ရက်နေ့တွင်အားဖြည့်ရွေးချယ်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု၏နောက်ထပ်ဥပမာထဲမှာပြသနေသည် ပုံ 4။ ဤကိစ္စတွင်တိရစ္ဆာန်အားရေအားဖြည့်ရန် ၂၈ ကြိမ်ဖိ (INT, 28 ± 21.19 sec ဆိုလို) ။ ထိပ်ထိပ် PEH-rasters မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 4, Acb ဆဲလ်ရေ - အားဖြည့်လီဗာပုံနှိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ် RFe လှုပ်ရှားမှုပြ။ Self- အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်စတင်သည်နှင့်တိရစ္ဆာန်သည်ကိုကင်းဓာတ်ကိုချက်ချင်းစတင်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုသုံးခုအတွင်း၌ပင်အာရုံခံဆဲလ်သည် RFe ပစ်ခတ်မှုကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် nonphasic လှုပ်ရှားမှုသို့ပြောင်းသွားခဲ့သည် (raster ထဲတွင်မြှားဖြင့်ဖော်ပြသည်) ။ စုစုပေါင်းဖိအားရှစ်ခုပြီးနောက်သတ္တဝါသည်လီဗာကိုဖိ။ ရပ်တန့်လိုက်ပြီးထပ်မံငါးကြိမ် ထပ်မံ၍ သွေးကြောသွင်းပိုးမှောင်နေသည့်သေအိမ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တွဲဆက်သည်။ Acb ဆဲလ်ကိုကိုကင်း primes များကမလှုပ်ရှားနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းနောက်ထပ်မံဖြည့်စွက်ဆေးမပါဘဲနောက်ထပ်တုန့်ပြန်မှု ၇ ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းအတွက်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသည်အစည်းအဝေး၏အဆုံးတွင်ရှိသော်လည်းဆဲလ်သည် nonphasic လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပြသခဲ့သည်။
အချိန်ဇယားမျိုးစုံ၏အပိုင်း ၁ တွင်ရေရွေးချယ်သည့်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှု၏ဥပမာတစ်ခု။ လက်ဝဲ PEHs မှ Acb ဆဲလ်သည်ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု (ထိပ်) နှင့် ပတ်သက်၍ RFe လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။ အလားတူ Acb ဆဲလ်သည်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု (အောက်ခြေ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက NP လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Raster ဖော်ပြချက်သည် PEHs တွင်ပြထားသောတူညီသောအာရုံခံဆဲလ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာမှု၏စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင်ပြသည်။ အဆိုပါဆဲလ်သည်ရေအားဖြည့်ပေးသောအဆင့်နှင့်ကိုကင်းကိုတုံ့ပြန်သည့်စမ်းသပ်မှုသုံးခုအတွင်း၌ RFe လှုပ်ရှားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် nonfasic လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက် (primaster infusions (raster ထဲတွင် primes များကညွှန်ပြသည်) နှင့်ကျန်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုကင်းထိတွေ့မှုနေ့ (၁) အတွင်း Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနှစ်ချုပ်ရန်အတွက်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုသည်သွေးကြောများအတွင်းသို့သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်သည့်တုန့်ပြန်မှုများအားနှိုင်းယှဉ်။ ရေအားတုန့်ပြန်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရသောကြောင့်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်မှာအတော်အတန်နည်းသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ၁၂.၂၅ မှ ၃.၉၂ တုံ့ပြန်မှု) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေလှုပ်ရှားမှု၏ရှင်းလင်းသောပုံစံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မျိုးစုံပြုလုပ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ် ၉၇ ခုအနက်မှအာရုံခံဆဲလ် ၄၂ သည်ရေနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်သည့်ပုံစံနှင့်ပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ ဆဲလ် ၄၂ ခုတွင်နျူရွန် ၃ ခု (၇%) ကသာလျှင်ရေနှင့်ကိုကင်းကိုအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံခံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားများကိုပြသခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအာရုံခံဆဲလ် (၃၉) ခု (၉၃%) သည်ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားသုံးမျိုး (PR, RFe, RFi) ကိုပြသခဲ့သည်။n = ၂၄ ဆဲလ်) သို့မဟုတ်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု (n = 14) ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်ရှိနေသေးသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်အားဖြည့်အခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။
အတွက်ပေါင်းစပ် PEHs ပုံ5အားဖြည့်ခြင်းအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်ကိုကင်း - ရွေးချယ်အာရုံခံများအတွက်ပုံမှန်ပစ်ခတ်မှု၏အကျဉ်းချုပ်ကိုပြသပါ။ Acb အာရုံခံ၏ဤလူ ဦး ရေရေအားဖြည့် (လက်ဝဲ PEHs) အတွက်တုံ့ပြန်လီဗာ - စာနယ်ဇင်းဆွေမျိုး nonphasic လှုပ်ရှားမှုပြကြောင်းသတိပြုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပုံစံထုတ်လွှတ်မှုသည်အလွန်အားမပြင်းသော်လည်း Acb neuron များကကိုကင်းဓာတ် (Left PEHs) အတွက်လီဗာတုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံစံထုတ်လွှတ်ခြင်း (PR, RFe, RFi) အမျိုးအစား ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာကိုကိန်း Prim များသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်း၏ပထမနေ့တွင်မကြာခဏပေးလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 1, 3), ဤတူညီသောအာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းသူတို့အား primes (တုံ့ပြန်မှု - လွတ်လပ်သောကိုကင်းထိုးခြင်းဟာသေံ - houselight နှိုးဆွနှင့်အတူ) ဆွေမျိုးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ PR စနစ်အတွက်ကိုကင်းကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းကို ၅ စက္ကန့်မတိုင်မီ ၅ စက္ကန့်အတွင်းသိသာသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိခဲ့ပါ။ (ပျမ်းမျှနှုန်းမှာ ၄.၄၅ - ၂.၁၈; ပြီးနောက်ပျမ်းမျှပစ်ခတ်မှုနှုန်း - ၃.၂၈ - ၁.၇၇) ။ p > 0.05), RFe (မတိုင်မီပျမ်းမျှနှုန်း, 2.55 ± 0.68; ပြီးနောက်ပျမ်းမျှနှုန်း, 1.56 ± 0.60; p > 0.05), ဒါမှမဟုတ် RFi ဆဲလ် (မတိုင်မီနှုန်း 1.75 ± 0.45; ပြီးနောက်ပျမ်းမျှနှုန်းပြီးနောက် 2.40 ± 0.46; p > 0.05) ။
အမျိုးမျိုးသောအချိန်ဇယား၏ပထမနေ့၌မှသာအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြသည့်အာရုံခံအားလုံးကိုပုံမှန်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၏ပေါင်းစပ်ထားသော PEHs ။ လက်ဝဲဘက်မှ PEH များကအာရုံခံ၏လူ ဦး ရေသည်ရေအတွက်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ NP လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်၊ တူညီသောဆဲလ်များသည်ကိုကင်းအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစား (PR, RFe, RFi) ၃ ခုအနက်မှတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Acb အာရုံခံဆဲလ်၏ဒုတိယလူ ဦး ရေသည်ရေနှင့်ကိုကင်းများအတွက်အချိန်ဇယားအတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ အတွက်ပေါင်းစပ် PEHs ပုံ6ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုမှတိကျသောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြသည့်အာရုံခံအားလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနှစ်ချုပ်။ ထဲမှာပြကိုကင်းအာရုံခံမတူဘဲ ပုံ 5, Acb အာရုံခံအတွက်ရုပ်ပြ ပုံ6ကိုကင်းမှဆန့်ကျင်အဖြစ်ဖွယ်ရှိရေများအတွက်ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေးကနေရရှိလာတဲ့, ရေများအတွက်ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်အများကြီးပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ဥတုပုံစံများပြ။ အရေးကြီးသည်မှာဤအာရုံခံ၏လူ ဦး ရေသည်ရေကိုပိုမိုအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်းအတွက်တုန့်ပြန်သောစမ်းသပ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ phasic ပစ်ခတ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးသောအချိန်ဇယား၏ပထမနေ့၌သာရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုမှဆွေမျိုးပုံစံထုတ်လွှတ်ပြအားလုံးအာရုံခံ၏ပုံမှန်ပစ်ခတ်မှု၏ Composite PEHs ။ လက်ဝဲဘက်မှ PEHs များအရအာရုံခံဆဲလ်များသည်ရေအတွက်အားဖြည့်ပေးသောတုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံအရထုတ်လွှတ်မှုပုံစံသုံးမျိုး (PR, RFe, RFi) ကိုပြသခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်၊ တူညီသောဆဲလ်များကကိုကင်းအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့် NP လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။
ရေ - ကိုကင်းမျိုးစုံစီစဉ်ထားစဉ်ကာလအတွင်းတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုပြုစဉ်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကို Nucleus ကပြုလုပ်ခဲ့သည်
Acb ဆဲလ်သေနတ်ပစ်မှုသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော (ပုံမှန်အားဖြင့်အပြောင်းအလဲမရှိသော်လည်း) မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုအပြုအမူကိုအချိန်ဇယားများစွာအတွင်းပြသခဲ့သည်။ ဆဲလ် ၈၉ ခုတွင်နျူရွန် ၄၂ သည်ရေနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံထုတ်လွှင့်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်တုန့်ပြန်သောအာရုံခံဆဲလ် ၄၂ ခုတွင်အာရုံခံဆဲလ်ငါးခု (၁၂%) ကသာလျှင်ရေနှင့်ကိုကင်းကိုအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံခံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားများကိုပြသခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအာရုံခံဆဲလ် ၃၇ ခုသည်ရေဖြင့်အားဖြည့်ပေးသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံစံသုံးမျိုး (PR, RFe, RFi) ပုံစံ ၃ ခုထဲမှတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။n ကိုကိန်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတွင်အချိန်ဇယားမျိုးစုံ (ပုံစံ ၂၄ ခုပါသောဆဲလ် ၂၄ ခု) သို့မဟုတ်ပုံစံထုတ်လွှင့်မှုပုံစံ ၄ မျိုးအနက် (PR၊ RFe, RFi, PR + RF) (n = 11) ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်ရှိနေသေးသောအာရုံခံဆဲလ် ၂ ခုသည်အားဖြည့်အခြေအနေနှစ်ခုလုံးအောက်တွင်သာမကပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံစံထုတ်ဆေးကိုပြခဲ့သည်။
တုံ့ပြန်မှုရှိသည့်အာရုံခံဆဲလ် ၄၂ ခုတွင်ဆဲလ် ၂၄ ခု (၅၇%) သည်ရေဖြင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပုံစံထုတ်လွှတ်သောအမျိုးအစား ၃ ခုထဲမှတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ n = ၄; RFe၊ n = ၉; RFi၊ n = 11) ။ ရေ - ရွေးချယ်အာရုံခံဆဲလ်၏ဥပမာတစ်ခုကိုဘယ်ဘက်တွင်ပြထားသည် ပုံ 7။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများသည်ကိုကင်းအတွက်အတော်အတန်မှားယွင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကိုကိုအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအာရုံခံဆဲလ်များမှဒုတိယအနည်းနည်းသောလူ ဦး ရေက ရွေးချယ်၍ encoded လုပ်ထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်, ဆဲလ်ရှစ်ကိုကင်းများအတွက်အင်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုဆွေမျိုးအထက်တွင်ဖော်ပြထားပုံစံပုံစံစွန့်ပစ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးထဲကတစ်ခုပြသခဲ့သည် (PR, n = ဆဲလ် ၂ ခု၊ RFe, n = ဆဲလ် ၃ ခု၊ RFi, n =3ဆဲလ်) ။ ထို့အပြင်စတုတ္ထအာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံသည်ယခင်ကကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်း၊Carelli နှင့် Deadwyler, 1994) ကိုကင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောတုံ့ပြန်မှုပထမနေ့တွင်သတိပြုမိခဲ့သည် (n =3ဆဲလ်) ။ PR + RF အာရုံခံဆဲလ်များကိုဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုတွင်ထူးခြားသောအထွတ်အထိပ်နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုသည်တုန့်ပြန်မှုမတိုင်မီနှင့်တုန့်ပြန်မှုပြီးဆုံးသောအခါ (PR ဆဲလ်များကဲ့သို့) နှင့်ဒုတိယအမြင့်ဆုံး (RFe ဆဲလ်များကဲ့သို့) တုန့်ပြန်မှုပြီးနောက်နှစ်ခုကြားရှိတားစီးမှုကာလ။ (RFi ဆဲလ်များကဲ့သို့) ထိပ်။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံဆဲလ်တစ်ခု၏ဥပမာကိုညာဘက်တွင်ပြထားသည် ပုံ 7.
ယုံကြည်စိတ်ချရသောတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်သည့်အချိန် - ရေရွေးချယ် (ဘယ်ဘက်) နှင့်ကိုကင်းရွေးချယ် (ညာ) အာရုံခံဆဲလ်များကိုပြသသည့် PEHs ။ လက်ဝဲ PEH များမှ Acb neuron (ဆဲလ် ၁) တစ်ခုသည်ရေကိုပိုမိုအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု (RFe; top) နှင့်ကိုကင်း (အောက်ခြေ) အတွက်အားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ချက်ချင်းပစ်ခတ်မှုနှုန်းပြသခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒုတိယတိရိစ္ဆာန်တစ်ခု၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောနောက်ထပ် Acb အာရုံခံဆဲလ် (ဆဲလ် ၂) သည်ရေအားဖြည့်သည့်အဆင့်တွင် nonphasic ပစ်ခတ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအတွင်း PR + RF လှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ရေ - ကိုကင်းအချိန်ဇယားအတွင်းတုန့်ပြန်မှုတည်ငြိမ်သည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစဉ်ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကို Nucleus ကတွေ့ရှိခဲ့သည်
Acb ဆဲလ်သေနတ်ပစ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုစီသည် (၇-၉dလေ့ကျင့်သင်ကြားမှု) တွင်အချိန်ဇယားများအတွင်းတည်ငြိမ်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြုအမူကိုပြသခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးတည်ငြိမ်သော session တစ်ခုအတွင်းမှမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ် ၁၀၂ ခုတွင်ဆဲလ် ၄၆ လုံးသည် water- သို့မဟုတ် cocaine- အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် (Carelli et al ။ , 2000တုံ့ပြန်မှုအာရုံခံဆဲလ် ၄၆ ခုအနက်မှအာရုံခံဆဲလ် ၄ ခု (၉%) ကသာလျှင်ရေနှင့်ကိုကင်းတုန့်ပြန်ရန်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည့်အာရုံခံထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားများကိုပြသခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအာရုံခံဆဲလ် (၄၂) ခုသည်ရေဖြင့်အားဖြည့်ပေးသောတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံစံ (၃) မျိုးအနက်မှတစ်ခု (PR, RFe, RFi) ကိုပြသခဲ့သည်။n ကိုကိန်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းတွင်အချိန်ဇယားမျိုးစုံ (ပုံစံ ၂၄ ခုပါသောဆဲလ် ၂၄ ခု) သို့မဟုတ်ပုံစံထုတ်လွှင့်မှုပုံစံ ၄ မျိုးအနက် (PR၊ RFe, RFi, PR + RF) (n = 20 ဆဲလ်) ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးမဟုတ်ပါဘူး ကိုကာကိုလာနှင့်ကိုကာကိုလာရွေးချယ်သည့် neuron များအတွက်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုဆိုလိုသည်မှာဇယားတွင်ပြထားသည် 1 နှင့် 2အသီးသီး။
Acb အာရုံခံ၏ဆိုလိုရင်း (SEM) သည် phasic ဆဲလ်များကိုရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြသသည်၊
Acb အာရုံခံ၏ဆိုလိုရင်း (SEM) သည် phaic ဆဲလ်များကိုကင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြုအမူစဉ်အတွင်းရေဖြင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ပါ
ရေ - ကိုကာကိုလာနှင့်ကိုကာကိုလာရွေးချယ်သည့်ဆဲလ်များမှရေရွေးချယ်မှု၏အကျဉ်းချုပ်ရေ - ကိုကင်းအမျိုးအစားဇယား၏အစိတ်အပိုင်း (သုံးခု၊ ကန ဦး၊
ပုံ 8 ရေ - ကိုကင်းအများအပြားအချိန်ဇယားကာလအတွင်း Self- အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းသုံးခုကာလအတွင်းအားဖြည့် - ရွေးချယ်အာရုံခံ၏ဖြန့်ဝေ၏အကျဉ်းချုပ်ပြသထားတယ်။ ရေကိုရွေးချယ်ကြောင်း phasically တက်ကြွအာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်း (သဖန်းသီး။ 8, ရေ), ကိုကင်းရွေးချယ် (သဖန်းသီး။ 8, ကိုကင်း), ဒါမှမဟုတ်အားဖြည့်အခြေအနေများနှစ် ဦး စလုံးဖြတ်ပြီးအလားတူပစ်ခတ်မှုပုံစံများ (သဖန်းသီး။ 8, နှစ် ဦး စလုံး) လေ့ကျင့်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (ကန ဦး, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ဒါမှမဟုတ်တည်ငြိမ်) ၏ function ကိုအဖြစ်ကြံစည်နေကြသည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှု (ကန ဦး) ၏ပထမနေ့တွင် phasically active neurons (၅၇%) သည်ရေကိုပိုမိုအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ အာရုံခံ၏သေးငယ်သောရာခိုင်နှုန်း (၃၃%) သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရချိန်တွင်သာ phasic ပစ်ခတ်မှုကိုပြသခဲ့သည် အဆင့်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အာရုံခံဆဲလ်အနည်းငယ် (၇%) ကသာအားဖြည့်အခြေအနေနှစ်ခုနှင့်ထပ်တူထပ်တူထပ်နေသည့်အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်း၏ (စိတ်ချရသော) ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတွင်ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုဖော်ပြသည့်အာရုံခံဆဲလ်ရာခိုင်နှုန်းသည်အချိန်ဇယား၏ပထမ ၁ (၅၆%) နှင့်ကိုကင်း - ရွေးချယ်သည့်အာရုံခံများ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဆင်တူသည်။ (57%) အတော်လေးနိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ အားဖြည့်သည့်အခြေအနေ (၂) ခုတွင်ထပ်တူထပ်တူထပ်နေသည့်အာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများပြသည့်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်နိမ့်ကျနေဆဲ (၁၂%) ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်တွေ့ရှိချက်များအရကိုကာကိုလာ (၄၃%) အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေ (၄၈%) ရာခိုင်နှုန်းသည်တည်ငြိမ်သောတုန့်ပြန်မှုကာလအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တူညီနေပြီးအာရုံခံဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုပုံစံများနှင့်ထပ်နေသောပြသထားသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။ %) ။ စုပေါင်းတွေ့ရှိချက်များအရရေဖြင့်အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုမှပုံစံထုတ်လွှတ်မှုများကိုဖော်ပြသောအာရုံခံဆဲလ်များသည်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့် phasic ပစ်ခတ်မှုပုံစံတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲအစား Acb အာရုံခံဆဲလ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ရေ - ကိုကင်းမျိုးစုံအချိန်ဇယားကာလအတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိလာချိန်တွင်ကိုကင်း - ရွေးချယ်သည့်အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေရွေးချယ်ခြင်း။ phasic ဆဲလ်ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းမျိုးစုံအချိန်ဇယားစဉ်အတွင်း Self- အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ကျင့်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းများ (ကန ဦး, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, တည်ငြိမ်) ကိုဖြတ်ပြီးဆဲလ်အမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့ function ကိုအဖြစ်ကြံစည်နေသည်။ Wat, Neurons များသည်ရေအားဖြည့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပုံစံထုတ်သည့်ပုံစံသုံးမျိုးအနက်မှတစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ ကိုကို၊ ကိုကင်း - အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံစံအမျိုးမျိုးထုတ်လွှတ်မှုအမျိုးအစားလေးမျိုးအနက်တစ်ခုမှပြသောအာရုံခံများ၊ နှစ် ဦး စလုံးသည်အားဖြည့် (ရေနှင့်ကိုကင်း) အခြေအနေများတွင်တူညီသောထပ်တူအာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုတွေ့ရသည့်အာရုံခံများ။
Zagm နှင့် Brog မှသတ်မှတ်ထားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာများအား Histological ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကစမ်းသပ်ချိန်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံဆဲလ်များသည် Acb ၏ rostral pole, core နှင့် shell ခွံခွဲများတွင်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည် (1992) ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာများသည် ၂ မီလီမီတာ rostral-caudal အကွာအဝေးကို ၂.၇ မှ ၀.၇ မီလီမီတာ rostral မှ bregma အထိနှင့်2မှ 2.7 mm မှဘေးနှစ်ဘက်မှအလယ်တန်းသို့ ၂ မီလီမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ Acb တွင်ဝါယာကြိုးများကိုနေရာချခြင်းမပြုသောအမှုများကိုအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှဖယ်ထုတ်ထားသည်။
Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏ကွဲပြားသောလူ ဦး ရေသည်ကိုကင်းအားသဘာဝ (အစားအစာနှင့်ရေ) အားဖြည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်မှန်းချက်ထားသည့်အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ရွေးချယ်၍ encode လုပ်သည်ကိုယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။Carelli et al ။ , 2000), မျောက်များအတွက်အစီရင်ခံရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီ (Bowman et al ။ , 1996) ။ သို့သော်ထိုရလဒ်များကိုကိုကင်းကိုကောင်းစွာစီမံရန်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များ (ဥပမာ ၁ ပတ်မှ ၃ ပတ်အကြာတွင်) ရရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများအရ psychomotor စိတ်ကြွဆေးကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းက Acb ရှိဆယ်လူလာ neuroadaptations ကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998; အဖြူရောင် et al ။ , 1998; Robinson နဲ့ Kolb, 1999; ရှီ et al ။ , 2002) နှင့်တခြားနေရာ (Ungless et al ။ , 2001; Fagergren et al ။ , 2003; Saal et al ။ , 2003) ။ နာတာရှည်ကိုကာကိုလာအတွေ့အကြုံသည်ယခင်အစီရင်ခံစာများတွင်တွေ့ရှိရသောအားဖြည့်ရွေးချယ်သည့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံကောင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန် Acb အာရုံခံဆဲလ်များသည်ကိုကာကိုလာထိတွေ့မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအစီအစဉ် မှနေ၍ ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပြီးနောက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ရေကိုကာကိုလာကိုဤတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကျနော်တို့အားဖြည့် - ရှေးခယျြဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုကင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအပေါ်မှီခိုလျှင်, Acb ဆဲလ်အများစုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့စဉ်အတွင်းကိုကိုးအားဖြည့်အခြေအနေများနှိုင်းယှဉ်ရေကိုဖြတ်ပြီးအာရုံကြောပစ်ခတ်မှုပုံစံများအလားတူပြသင့်ကြောင်းတွေးဆ။ သို့သော်ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များ Acb အာရုံခံဆဲလ်အစောပိုင်းမျိုးစုံအချိန်ဇယား၏ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အားဖြည့်ရွေးချယ်လှုပ်ရှားမှုပြကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက Acb ရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များသည်သီးခြားသဘာဝအရအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကွဲပြားခြားနားစွာ encode လုပ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာသည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မဟုတ်ဟုမြင်သည်။
Acb အာရုံခံ၏ကွဲပြားသောလူ ဦး ရေသည်ကိုကင်းအားကန ဦး ထိတွေ့စဉ်ကကိုင်းနှင့်ရေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို ရွေးချယ်၍ encode လုပ်သည်
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ Acb ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုရေ - ကိုကင်းအများအပြားအချိန်ဇယားအတွင်းကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှုဝယ်ယူစဉ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူသည်အစပိုင်းတွင်မှားယွင်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Acb အာရုံခံ၏ကွဲပြားလူ ဦး ရေအစောပိုင်း Self- အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ကျင့်ရေး၏ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရေကိုအားဖြည့်နှိုင်းယှဉ်ကိုကင်းများအတွက်ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားအပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက် encoded ။ မှတ်သားစရာမှာကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အဆုံးတွင်ပုံစံထုတ်လွှင့်မှုများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 3) သို့မဟုတ် Self- အုပ်ချုပ်စဉ် (ရေကိုရွေးချယ်အာရုံခံများအတွက်) ပျောက်ကွယ်သွားသည် (သဖန်းသီး။ 4) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည် Acb တွင်သီးခြားအာရုံကြောပတ်လမ်းများရှိသည်ဟူသောအမြင်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ နာတာရှည် (ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကျော်ကျော်) မူးယစ်ဆေးဝါးအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသောသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို ရွေးချယ်၍ encode လုပ်သည့် Acb တွင်ရှိသည်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာများတွင်ရေ ရွေးချယ်၍ ကိုကင်းရွေးချယ်သည့်အာရုံခံဆဲလ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် ပုံ 8, ပထမ ဦး ဆုံး session တစ်ခုအတွင်းမှာ phasically တက်ကြွအာရုံခံ၏အများစု, ရေများအတွက်ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားထားအပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက် encoded, ဖြစ်နိုင်သည်တိရိစ္ဆာန်များကန ဦး မျိုးစုံအချိန်ဇယားကိုအကောင်အထည်ဖော်မီရေဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရေကို ရွေးချယ်၍ ကိုကင်းရွေးချယ်သည့်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်တည်ငြိမ်သောမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှသည်။ အရေးကြီးသည်မှာလေ့ကျင့်မှုအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင်အားဖြည့်သည့်အခြေအနေနှစ်ခုတွင်ဆင်တူသည့်ထပ်တူအာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံများကိုပြသည့်အာရုံခံဆဲလ်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ စုပေါင်း၍ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်တိရိစ္ဆာန်များကိုပြုမူခြင်း၌ Acb ဆဲလ်များပစ်ခတ်ခြင်း၏လှုပ်ရှားမှုသဘောသဘာဝကိုပြသသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည်မှာစတုတ္ထအာရုံခံပစ်ခတ်မှုပုံစံ၊ ကိုကာကိုလာသို့မဟုတ် PR + RF အမျိုးအစားကိုကိုကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းတွင်သာဖြစ်ပြီးရေအားဖြည့်ပေးသောအစည်းအဝေးများမဟုတ်ပါ။Carelli နှင့် Deadwyler, 1994; Carelli၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်) ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ PR + RF အာရုံခံဆဲလ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့စဉ်ကတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲရက်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တွင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ကိုအကျိုးရှိစေမည့်ဆားကစ်အတွင်းရှိဆယ်လူလာ neuroadaptations သည်ကိုကင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုမှဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်။ဟင်နရီနှင့်အဖြူရောင်, 1991; အဖြူရောင် et al ။ , 1995; အဖြူနှင့်အ Kalivas, 1998; ရှီ et al ။ , 2002) ။ ထို့ကြောင့် PR + RF အာရုံခံများသည် Acb neuron များအစုအဝေးတစ်ခု၏ activation ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအခြားဆဲလ်အမျိုးအစားများနည်းတူ PR + RF အာရုံခံများသည်ရေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခြင်းကြောင့်ရေသည်ရည်မှန်းချက်ကိုညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူများကိုကုဒ်ထုတ်ပေးသည့်အာရုံခံဆဲလ်အချို့ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များသည်ယခင်သတင်းများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည်။ Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏အတိအကျကိုကိုကင်းဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်လှုပ်ရှားသည်ကိုဖော်ပြသည် (Carelli, 2000, 2002) အဖြစ်ကိုကင်းရရှိမှု (Ghitza et al ။ , 2003) ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစည်းအဝေးများအတွင်းကိုကင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခဲ့သောအသံဗွီဒီယိုလှုံ့ဆော်မှုများ၏တုန့်ပြန်မှုမရှိသည့်တင်ပြချက်များသည် Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏လူ ဦး ရေကိုတက်ကြွစေသည်။ အထူးသဖြင့်သွေးကြောသွင်းအတွင်းကိုကင်း (RFe, RFi နှင့် PR + RF) တုန့်ပြန်မှုပြီးနောက်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစီးဆင်းသောအာရုံခံဆဲလ်များကိုဤအခြေအနေတွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ Acb အာရုံခံကန ဦး လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ (Session 1) စဉ်အတွင်းတင်ပြသည့်အခါဤတူညီသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတွဲကိုကင်း၏သွင်းသွင်းခြင်းဖြင့် activated ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်မှတ်တမ်းတင်ကိုကင်း - ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် Acb အာရုံခံဆဲလ်၏ activation (အမြင်နှင့်ကိုက်ညီသည်)Carelli, 2000ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုတို့အကြားလေ့လာထားသည့်အသင်းအဖွဲ့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သဘာဝအားဖြင့်ကိုကင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူများပြုလုပ်ရာတွင် Acb အာရုံခံဆဲလ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများအရ Acb သည် prefrontal cortex၊ hippocampus ၏ subiculum, basolateral amygdala နှင့် ventral tegmental includingရိယာများအပါအ ၀ င် cortical နှင့် subcortical structure များမှ convergence synaptic inputs ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာပြတယ်။ (Groenewegen et al ။ , 1987,1991; Zahm နှင့် Brog, 1992; Brog et al ။ , 1993; Heimer et al ။ , 1995, 1997; Wright et al ။ , 1996). striatum သည် basal ganglia နှင့် cortex ကိုဆက်သွယ်ပေးသော function ကိုခွဲခြားထားသော circuit များ၏ပိုကြီးသောစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုထားပြီး၊ ၎င်း circuit များအတွင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအားအဓိကအားဖြင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ (အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1986; အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Crutcher, 1990; Groenewegen et al ။ , 1996). ထို့အပြင်လေ့လာမှုမြောက်မြားစွာက Acb သည်ရည်မှန်းချက်ကိုညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူများစတင်ခြင်းအပါအဝင်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြောင်းအလဲကို subservation ပိုကြီးသော circuit ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် (ပညာရှိ 1998; Pennartz et al ။ , 1994; Carelli၊ ၂၀၀၂b). လက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရဤပိုကြီးသောစနစ်အတွင်းသီးခြား“ microcircuit” (အနည်းဆုံး Acb အဆင့်တွင်) ရှိကြောင်းပြသခြင်းဖြင့်ထိုအမြင်များကိုတိုးချဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Acb အာရုံခံဆဲလ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေသည်သဘာဝ (အစားအစာနှင့်ရေ) အတွက်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူများကို ရွေးချယ်၍ encode လုပ်သည်။ ကိုကင်းဆု။ ဤသည်ကိုရွေးချယ် activation ဖွယ်ရှိ Acb အာရုံခံ၏ discrete အစိတ်အပိုင်းများ (cortical နှင့် subcortical အဆောက်အ ဦ များအနေဖြင့်) afferent activation ၏အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျ, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကဒီစနစ်က Acb ၏ပင်သဘာဝအလုပ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ဟန်နှင့်နာတာရှည်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မဟုတ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များသည် Pennartz et al မှအဆိုပြုထားသော Acb ၏အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့အစည်း၏သီအိုရီဆိုင်ရာအမြင်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ (1994) ။ သူများသည်စာရေးသူအဆိုအရ Acb အာရုံခံ "ensembles" သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူဆဲလ်အုပ်စုတစ်စု၏စုဆောင်းမှုပါဝင်သည်ကြောင်းအဆိုပြုထား။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံခံဆဲလ် ensembles ၏ activation သည်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤတွင်နှင့်ယခင်လေ့လာမှုများတွင်တိရိစ္ဆာန်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်သဘာဝဆုလာဘ်အတွက်တူညီသောအပြုအမူတုန့်ပြန်မှု (လီဗာဖိအား) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်၊ သို့သော် Acb အာရုံခံဆဲလ်အချို့သည်အားဖြည့်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်သာတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များကအာရုံခံဆဲလ်များ၏တိကျသောလူ ဦး ရေကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေမှုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးပထမဆုံးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တိရိစ္ဆာန်များပြုမူအတွက် Acb ဆဲလ်ပစ်ခတ်၏ပြောင်းလဲနေသောသဘောသဘာဝနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူကန ဦး အတှေ့အကွုံအပြီးအားဖြည့် - တိကျတဲ့အခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းတစ်ခုတည်း Acb အာရုံခံ၏သရုပ်ဖော်သည်။
တိရိစ္ဆာန်များအားပြုမူသောဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည် Acb ၏အားဖြည့်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောအပြောင်းအလဲအတွက် Acb ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္supportကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Acb အာရုံခံများသည်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက်ပန်းတိုင် - ညွှန်ကြားသည့်အပြုအမူများ၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကိုပြသည်Carelli နှင့် Deadwyler, 1994; Chang et al ။ , 1994, 1998; လူမျိုးနှင့်အနောက်, 1996; လူမျိုး et al ။ , 1998; Carelli, 2000; Schultz, 2000) ။ Acb ရှိအာရုံခံဆဲလ်များ၏ကွဲလွဲသောကဏ္etsများသည်ကိုကင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသဘာဝ (အစားအစာနှင့်ရေ) အကျိုးအမြတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရွေးချယ်ဖော်ပြသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားဖြည့် - သတ်သတ်မှတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဤရွေးချယ်ထားသော encoding သည်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်သော်လည်းစောစီးစွာပထမဆုံးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်မှုအကြိမ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြင့်ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုတိုးချဲ့သည်။ သို့သော်ဤလုပ်ဆောင်မှု၏အခြေခံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းသည်ပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောပိုမိုသောယေဘူယျအာရုံကြောစနစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ မသိရStewart က et al ။ , 1984; Robinson နဲ့ Berridge, 2003) ။ တနည်းအားဖြင့်ကိုကင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်သောအာရုံခံဆဲလ်များကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Acb သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောကြောင့် (Everitt, 1990; Wenkstern et al ။ , 1993; Hull et al ။ , 1999; Kippin et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင်ကိုကင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများမထိရောက်မှီတိုင်အောင်ပျင်းရိနေသောနဗ်ကြောများ၏လူ ဦး ရေကိုအသက်ဝင်စေနိုင်သည်။Grigson, 2002) ။ မည်သို့ပင်အလုပ်လုပ်စေကာမူပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များအရ Acb အာရုံခံဆဲလ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ချက်ချင်းနီးပါးကိုကင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောအပြုအမူများကိုကုဒ်သွင်းရန်စုဆောင်းထားကြောင်းဖော်ပြသည်။ အရေးကြီးသည်နှင့်ဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြissueနာတစ်ခုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဤလှုပ်ရှားမှုသည်ထင်ရှားနေဆဲရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 28, 2003 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူအောက်တိုဘာလ 6, 2003 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံအောက်တိုဘာလ 8, 2003 ။
ဒီသုတေသနကို RMC ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာ Grant DA14339 အမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ Alison Crumling၊ Susan Brooks နှင့် Richard Roop တို့သည်နည်းပညာအကူအညီအတွက်၊ Mitch Roitman သည်ဤလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောမှတ်ချက်များအတွက်နှင့် Sue Grigson တို့အားဤစမ်းသပ်မှုအတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်သောအကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စိတ်ပညာဌာန၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ချာပယ်ဟေးလ်ရှိ CB 3270၊ Davie Hall၊ Chapel Hill, NC 27599-3270 သို့စာပေးစာယူကိုလိပ်စာပေးသင့်သည်။ အီးမေးလ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်မူပိုင်© 2003 Society of 0270-6474 / 03 / 2311214- • $ 15.00 / 0
အလက်ဇန်းဒါး GE, Crutcher MD (1990) Basal ganglia ဆားကစ်၏ Functional ဗိသုကာ: အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 13: 266-271 ။
အလက်ဇန်းဒါး GE, DeLong MR, Strick PL (1986) Basal ganglia နှင့် cortex ကိုဆက်သွယ်ပေးသော function segregated circuits ၏အပြိုင်ဖြစ်သည်။ Annu ဗြာ Neurosci 9: 357-381 ။
Bowman EM, Aigner TG, Richmond BJ (1996) ဖျော်ရည်နှင့်ကိုကင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောမျောက် ventral striatum ရှိအာရုံကြောအချက်ပြမှု။ J ကို Neurophysiol 75: 1061-1073 ။
Brog JS, Salyapongse A, Deutch AY, Zahm DS (1993) ။ ventral striatum ၏ "accumbens" အစိတ်အပိုင်း၏ afferent innervation ၏ပုံစံများ - retrogrely သယ်ယူပို့ဆောင်ထားသော fluoro-gold ကို immunohistochemical detect ။ J ကို Comp Neurol 338: 255-278 ။
တိရိစ္ဆာန်များတွင် Caine SB၊ Lintz R၊ Koob GF (၁၉၉၃) သွေးကြောဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်မှုနည်းစနစ်များ။ ခုနှစ်တွင်: အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်မှု (Sahgal အေ, ed), စစ 1993-117 ။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့ UP ။
Carelli RM (2000) ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကာလအတွင်းကိုကင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့် accumbens ဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ Synapse 35: 238-242 ။
Carelli RM (2002a) Nucleus သည်ကိုကင်းအားသဘာဝအားဖြည့်အားဖြည့်ရန်ရည်မှန်းချက်ထားသည့်အပြုအမူများစဉ်အတွင်းဆဲလ်ပစ်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Physiol Behav 76: 379-387 ။
Carelli RM (2002b) နျူကလိယကတိကျပြီးဆုလာဘ် - တိရိစ္ဆာန်များကိုပြုမူခြင်းတွင် neurophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ။ Behav Cogn Neurosci ဗြာ 1: 281-296 ။
Carelli RM, Deadwyler SA (1994) နျူကလိယနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းအားကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကြွက်များတွင်ရေအားဖြည့်ခြင်းတို့တွင်အာရုံခံပစ်ခတ်ခြင်းပုံစံများကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ J ကို Neurosci 14: 7735-7746 ။
Carelli RM, Ijames S, Crumling A (၂၀၀၀) သက်သေအထောက်အထားသည်နျူကလိယအတွင်းရှိအာရုံကြောဆိုင်ရာဆားကစ်များကိုခွဲခြားထားခြင်းကကိုကင်းအားသဘာဝ (ရေနှင့်အစားအစာ) ဆုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ J ကို Neurosci 2000: 20-4255 ။
Chang JY၊ Sawyer SF၊ Lee RS, Woodward DJ (1994) ကြွက်များတွင်လွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနေသောကြွက်များရှိကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင်နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ for အတွက် Electrophysiological နှင့် pharmacological အထောက်အထား။ J ကို Neurosci 14: 1224-1244 ။
Chang JY၊ Janak PH၊ Woodward DJ (1998) ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်စဉ်အတွင်း mesocorticolimbic အာရုံခံတုန့်ပြန်မှုနှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ J ကို Neurosci 18: 3098-3115 ။
Everitt BJ (1990) လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု - ကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်နှင့် copulatory တုန့်ပြန်မှုအခြေခံယန္တရားများ၏အာရုံကြောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ Neurosci Biobehav ဗြာ 14: 217-232 ။
Fagergren P, Smith HR, Daunais JB, Nader MA, Porrino LJ, Hurd YL (2003) prodynorphin mRNA ကိုကိုကင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ယာယီအဆင့်မြှင့်ခြင်း။ Eur J ကို Neurosci 17: 2212-2218 ။
Ghitza UE, Fabbricatore AT, Prokopenko V, Pawlak AP, West MO (2003) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကင်းမှကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက် accumbens neuron များ၏စွဲမြဲနေသည့် cue-evoked လှုပ်ရှားမှု။ J ကို Neurosci 23: 7239-7245 ။
Green JD (၁၉၅၈) ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်မှမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်ရိုးရှင်းသော microelectrode ။ သဘာဝ 1958: 182 ။
Grigson PS (2002) ချောကလက်အတွက်မူးယစ်ဆေးလိုပဲ။ Physiol Behav 76: 389-395 ။
Groenewegen HJ၊ Vermeulen-Van Der Zee E, Te Kortschot A, Witter MP (1987) အဖွဲ့ခွဲသည် subiculum မှကြွက်များ၏ ventral striatum သို့စီမံကိန်း။ Phaseolus vulgaris leucoagglutinin ၏ anterograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုတစ်ခု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 23: 103-120 ။
Groenewegen HJ၊ Berendse HW, Meredith GE, Haber SN, Voorn P, Walters JG, Lohman AHM (1991) ၏ ventral, limbic system-innervated striatum ၏လုပ်ဆောင်မှုခန္ဓာဗေဒ။ ခုနှစ်တွင်: အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူ။ (Willner P ကို, Scheel-Kruger J ကို, eds), စစ 19-59 ။ နယူးယောက်: Wiley ။
Groenewegen HJ၊ Wright CI, Beijer AV (၁၉၉၆) နျူကလိယကမူမော်တာစနစ်သို့ရောက်ရှိရန်ကိုယ်လက်အင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံအတွက်တံခါးပေါက်လား။ Prog ဦး နှောက် Res 1996: 107-485 ။
Heimer L, Zahm DS, Alheid GF (1995) Basal ganglia ။ ခုနှစ်တွင်: ကြွက်အာရုံကြောစနစ်, Ed က2(Paxinos, G, ed), စစ 579-628 ။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာ
Heimer L, Alheid GF, de Olmos JS, Groenewegen HJ, Haber SN, Harlan RE, Zahm DS (1997) အဆိုပါအခိုင်အမာ - အဓိကအားဖြင့် - shell ကို dichotomy ကျော်လွန်ပြီး။ J ကို Neuropsychiatry Clin Neurosci 9: 354-381 ။
Henry DJ, White FJ (1991) ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်၏နျူကလိယအတွင်း၌ D1 dopamine receptor sensitivity ကိုမြဲမြံစွာတိုးမြှင့်စေသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 258: 882-890 ။
Hull EM, Lorrain DS, Du J, Matuszewich L, Lumley LA, Putnam SK, Moses J (1999) လိင်အပြုအမူထိန်းချုပ်မှုတွင်ဟော်မုန်း - neurotransmitter interaction က။ Behav ဦး နှောက် Res 105: 105-116 ။
appetitive အပြုအမူတွေအတွက် ventral striatal အခန်း၏ကယ်လီ AE (1999) Functional တိကျတဲ့။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 877: 71-90 ။
Kippin TE, Cain SW, Pfaus JG (2003) အလွန်ကြီးထွားသောအနံ့များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအရကြားနေသည့်အနံ့များသည်ကြွက်များတွင်သီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်စေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 117: 971-979 ။
Koob GF၊ LeMoal M (၂၀၀၁) မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ Neuropsychopharmacology 2001: 24-97 ။
အာရုံကြော ensemble အသံသွင်းဘို့ Nicolelis MAL (1999) နည်းလမ်းများ။ Boca Raton, FL: CRC ။
Nicolelis MAL, Ghazanfar AA, Faggin BM, Votaw S, Oliveira LMO (၁၉၉၇) engram ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း - တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ multisite နှင့်တစ်ခုတည်းအာရုံခံဆဲလ်များစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ Neuron 1997: 18-529 ။
Paxinos, G, Watson C (1997)၊ stereotaxic ကိုသြဒီနိတ်များတွင်ကြွက် ဦး နှောက်၊ Ed 3. San Diego: Academic ။
Pennartz CM, Groenewegen HJ, Lopes da Silva FH (1994) နျူကလိယသည်အာရုံခံအာရုံကြောအဖွဲ့များစုစည်းထားသည့်အပြုအမူ၊ electrophysiological နှင့်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Prog Neurobiol 42: 719-761 ။
Peoples LL, West MO (1996) ကြွက်၏နျူကလိယတွင်တစ်ခုတည်းအာရုံခံဆဲလ်များကို Phasic ပစ်ခတ်မှုသည်သွေးကြောသွင်းကင်းကင်းအုပ်ချုပ်မှုအချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို Neurosci 16: 3459-3473 ။
Peoples LL, Gee F, Bibi R, West MO (1998) ကိုကာကိုလာ၏ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ရွေ့လျားခြင်းသို့သော့ခတ်ထားသော Phasic ပစ်ခတ်မှုအချိန် - တစ်ခုတည်းနျူကလိယ၏သီးခြားပစ်ခတ်မှုပုံစံများသည်ကြွက်များတွင်အာရုံခံဆဲလ်များကိုဖမ်းယူသည်။ J ကို Neurosci 18: 7588-7598 ။
Peoples LL, Uzwiak AJ, Gee F, West MO (1999) ကြွက်၏နျူကလိယကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းသည်အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် - နေ့စဉ်ကိုကင်းကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်သောပထမ ၂ ပတ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုများ။ ဦး နှောက် Res 2: 822-231 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (2003) စွဲ။ Annu ဗြာ Psychol 54: 25-53 ။
အမ်ဖက်တမင်းသို့မဟုတ်ကိုကင်းနှင့်ကြိုတင်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex ရှိ dendrites နှင့် dendritic spines များ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်း Robinson TE, Kolb B (1999) ။ Eur J ကို Neurosci 11: 1598-1604 ။
Saal: D, Dong Y, Bonci A, Malenka RC (2003) အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသည် dopamine neuron များတွင် synaptic adaptation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuron 37: 577-582
Schultz W (၂၀၀၀) ဦး နှောက်ထဲမှာဆုတွေအများကြီး။ နတ်ဗြာ Neurosci 2000: 1-199 ။
Stewart J, deWit H, Eikelboom R (၁၉၈၄) ဘိန်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ခြွင်းချက်မရှိခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသက်ရောက်မှုများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Psychol ဗြာ 1984: 91-251 ။
Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci A (2001) လူပျိုကင်းကင်းထိတွေ့မှု Vivo အတွက် dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည် potentiation သွေးဆောင်။ သဘာဝ 411: 583-587 ။
Wenkstern: D, Pfaus JG, Fibiger HC (1993) Dopamine ကူးစက်မှုသည်ကြွက်များ၏နျူကလိယခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကြွက်များအားလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလက်ခံသောအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့စဉ် ဦး နှောက် Res 618: 41-46 ။
အမ်ဖီတမင်းနှင့်ကိုကင်းစွဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် White FJ, Kalivas PW (1998) Neuroadaptations ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် ၅၁: ၁၄၁-၁၅၃ ။
White ME, Hu XT, Zhang XF, Wolf ME (1995) ကိုကင်းသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုသည် mesoaccumbens dopamine စနစ်အတွင်းအချိုမှုအတွက်အာရုံခံတုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 273: 445-454 ။
White FJ, Hu XT, Zhang XF (1998) နျူကလိယတွင် Neuroadaptations ထပ်ခါတလဲလဲကိုအုပ်ချုပ်မှုကနေရရှိလာတဲ့အာရုံခံ accumbens ။ Adv Pharmacol 42: 1006-1009 ။
Wise RA (၁၉၈၂) ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဆု၊ ခုနှစ်တွင်: နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်ဆုလာဘ်၏အာရုံကြောအခြေခံ (Hoebel BG, Novin: D, eds), စစ 1982-445 ။ Brunswick, ME: Haer တက္ကသိုလ်။
Wise RA (၁၉၉၇) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမိမိကိုယ်မိမိထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်သည်။ အစာစားချင်စိတ် ၂၈: ၁-၅ ။
Wise RA (၁၉၉၈) ဦး နှောက်အတွက်အကျိုးရှိစေမည့်လမ်းကြောင်းများမူးယစ်ဆေးသုံးခြင်း။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် ၅၁း၁၃-၂၂ ။
Wright CI, Beijer VJ, Groenewegen HJ (၁၉၉၆) ကြွက်များ၏နျူကလိယခုံကိုမှတ်သားထားသော Basal amygdaloid ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ J ကို Neurosci 1996: 16-1877 ။
နာတာရှည်ကိုကင်းအားဖြင့်အုပ်စု II ကို metabotropic အချိုမှု receptor အချက်ပြ၏ Xi ZX, Ramamoorthy S က, Baker DA, Shen H ကို, Samuvel DJ သမား, Kalivas PW (2002) Modulation ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 303: 608-615 ။
Zahm DS, Brog JS (1992) ကြွက် ventral striatum ၏“ accumbens” အစိတ်အပိုင်းတွင်နယ်မြေများ၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 50: 751-767 ။
dorsolateral caudate နျူကလိယကသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်အချက်များမှကင်းကိုခွဲခြားသည် PNAS,5မတ်လ 2013, 110 (10): 4093-4098
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှာဖွေခြင်းအားဆက်စပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Hypothalamus လိုအပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,4ဖေဖော်ဝါရီလ 2009, 29 (5): 1331-1342
Phosphorylation - မှီခိုသော GluR2 ပါ ၀ င်သောလူကုန်ကူးမှု Nucleus ၌ AMPA Receptors များလူကုန်ကူးမှုသည်ကိုကင်းရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ Pl မှပါ ၀ င်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 22 အောက်တိုဘာလ 2008, 28 (43): 11061-11070
CA3 ရှိ Neural Ensembles သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာ၌တိတိကျကျတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏လမ်းကြောင်းများကို Encode လုပ်သည် အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,7နိုဝင်ဘာလ 2007, 27 (45): 12176-12189
နျူကလီးယပ် Accumbens နှင့် Pavlovian ဆုကြေးသင်ယူ အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 1 ဧပြီလ 2007, 13 (2): 148-159
dynamic neuroplasticity နှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏အလိုအလျောက်။ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀ (၁၀) - ၅၈၀-၅၉၁
Nucleus Accumbens တွင်ထူးခြားသောအာရုံကြောလူ ဦး ရေ၏အာဟာရနှင့်အရသာခံအပြုအမူများကို encoding အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,2ဖေဖော်ဝါရီလ 2005, 25 (5): 1193-1202
ကန ဦး ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အခြေခံအားပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းအပေါ် Metabotropic အချိုမှုန် 2/3 Receptor Agonist LY379268 ၏ ဦး စားပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ကိုကင်းနှင့်အစွမ်းထက်သောသမားရိုးကျအားဖြည့်အပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှု အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 19 မေလ 2004, 24 (20): 4723-4727